FH-GS High Speed ​​High Quality Kwụ Ọtọ kpọmkwem asọfe Machine - Error 404 (Not Found)!!1
Ị nọ ebe a : Home >Product >Yarn asọfe igwe >FH-GS nkenke asọfe igwe
FH-GS High Speed ​​High Quality Kwụ Ọtọ kpọmkwem asọfe Machine
Eji na atụmatụ:
Nke a na usoro nke elu-ọsọ nkenke ntụgharị ọdabara na asọfe nke hank rewinding ma ọ bụ rewinding owu, hemp, ajị anụ, chemical eriri na blended yarn. The igwe bụ otu kwadoro ọrụ, mpempe akwụkwọ metal Ọdịdị; ihuenyo mmetụ centralized akara; Yarn akpụ adopts n'ụzọ zuru ezu digitized, programmable, elu-ọsọ na online erughị ala controllable akpaka nsuso akpaka unwinding electronic yarn akpụ akara usoro, wepụ omenala uche Mechanical Ọdịdị nnyefe mmezi bụ cumbersome na n'ibu mkpọtụ; High-nkenke na elu-nkenke elu-ọsọ ntụgharị na-ghọtara, na akpaka ịkpụzi akara na dechara dị ka chọrọ njupụta, adụ ihu, dị iche iche ihu n'akuku, akpụ ogologo, etc. aka ngwaọrụ ndị ọzọ na. Dị ka refueling ngwaọrụ izute mmepụta usoro
FH-GS High-Speed ​​nkenke asọfe Machine (hank ka cone ma ọ bụ cone ka cone)
Nkenke agazu asọfe igwe(ọkwụrụ bekee cone ntụgharị igwe),otutu atụmatụ, elu uzu na ngwa. The asọfe ọsọ nke a igwe na-achịkwa kọmputa, nke nwere kacha nke 1200 m / min. Kpọmkwem na mwute ọsọ ule usoro pụrụ ọbụna hụ na asọfe ogologo (ibu). Ọ bụ nnọọ adabara asọfe naịlọn, filament yarn, polyester yarn, FDY, DTY ọzọ chemical eriri.
Product aha FH-GS Oke ọsọ nkenke asọfe Machine
ụdị nke asọfe nkenke asọfe
Spindle Nos. nke onye ọ bụla otu 4 spindles
Min / max nke spindles 4-60spindles
Spindle nlele 500 mm
mbanye Onye ọ bụla spindle arụ ọrụ iche iche
akpụ usoro kọmputa eduzi yarn.
Bobbin ụdị ewepụghị bobbin ma ọ bụ cone(dị ka sample&nbobbinbbin nke ahịa.)
ngwugwu udi tubular ma ọ bụ skein udi hank yarn
Oke silk billet dayameta ≤300mm
Oke asọfe nso 152mm / 190m / 230mm (Nhọrọ)
Single spindle ngụkọta ike 500W
Power ọkọnọ 190-230mm
agbagọkwa agazu 380V 50Hz atọ-adọ ise waya usoro. (Nhọrọ)
Per otu size L1770mm X W700mm X H1560m
Head ulo nke igwe size L460mm X W420mm X H1200mm
Mechanical speed Max 1200 Mita / min(adabere on usoro parameters)
Oil ụzọ Automatic oiling, speed mgbanwe
Yarn ịgụ nso 20d --- 1000d
ngwugwu ibu Up ka 3kg(dabere on na dịgasị iche iche nke yarn)
Yarn ụdị kpuchie yarn, nkịtị filaments, na-agbanwe yarns, mma technical yyarnsnbsp;etc.
Previous : FH-GS High Speed ​​High Quality Kwụ Ọtọ kpọmkwem ntụgharị Machine
Osote : High Speed ​​painiapulu cone ntụgharị Machine